avo aryry tokana Light for Dock mpamatsy ary mpanamboatra - Shina orinasa - Langxu Lighting.
Home > Products > avo andry tokana Lighting Pole > avo andry tokana Lighting pole for Dock > avo andry tokana Light for Dock
Ny fanitsiana ny jiro avo:1. Ny endrika mazàna dia dodecagon na octagonal conical poste, amin'ny alàlan'ny vilia vy lehibe aorian'ny fahatapahana, ny miondrika, ny famonosana mandeha ho azy, ny haavon'ny ankapobeny dia 25m, 30m ary 35, ny famoronana rivotra farany avo indrindra hatramin'ny......
Ny fanitsiana ny jiro avo:
1. Ny endrika mazàna dia dodecagon na octagonal conical poste, amin'ny alàlan'ny vilia vy lehibe aorian'ny fahatapahana, ny miondrika, ny famonosana mandeha ho azy, ny haavon'ny ankapobeny dia 25m, 30m ary 35, ny famoronana rivotra farany avo indrindra hatramin'ny 60 metatra / faharoa.
2. Ao amin'ny firafitry ny fiasa, fa amin'ny fitaovana haingon-trano indrindra indrindra amin'ny vy, fantsom-by, ny jiro, ny vilia fanaovan-jiro dia mikorana ny rano.
3. Ny rafi-pitondrana herinaratra dia misy motera herinaratra, winch, telo setrin'ny tariby vy misy tariby mafana be sy ny tariby sy ny sisa. Ny ao anaty ny jiro dia apetraka miaraka amin'ny hafainganam-pandeha avo 3 ka hatramin'ny 5 metatra isan-minitra.
4. Ny rafitra mitari-dalana sy mitondra entana dia miaraka amin'ny kodiarana mpitari-dàlana sy sandry mpitantana mba hahazoana antoka fa tsy mihetsika transversely.during ny fantson-jiro. Rehefa tonga ny takelaka fanaovan-jiro dia afaka arotsaka mora foana ny takelaka fanaovan-jiro ary voafatin'ny fehy.
5. Ny jiro elektrika jiro dia ahitana jiro 6 ka hatramin'ny 24, 400 W, 1000 W, halide metaly (jiro fotsy), jiro sy jiro.
6. rafitra fiarovana amin'ny tselatra: ny tampon-jiro dia misy tsiro 1,5 metatra lava,
Ny fototra any ambanin'ny tany dia miaraka amin'ny tariby vita amin'ny tany 1 metatra ny halavany ary ento miaraka amin'ny bolo any ambanin'ny tany.
Hot Tags: avo andry tokana Light for Dock, Shina, Manufacturers, mpamatsy, Factory, Wholesale, Buy, namboarina, ao amin'ny staoky, Cheap, Pricelist, teny nindramina, Style